မီးဖွားပြီးနောက် အမျိုးသားနဲ့ အတူပြန်နေတဲ့အခါ သွေးဆင်းခြင်း ။ ။ - Hello Sayarwon
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ 10/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မီးဖွားတယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်စလွယ်တည်း မီးဖွားချိန် နဲ့နောက်ပိုင်း မီးဖွားပြီးတဲ့အချိန်တွေအထိ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ချည်း ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ ဒီအထဲမှာ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း အမျိုးသားနဲ့ အတူနေတဲ့ ကိစ္စလည်းပါတာပေါ့။
မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတိုင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေတဲ့အချိန် သွေးဆင်းတဲ့ ပြဿနာဟာ စိတ်ညစ်စရာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ။ စိုးရိမ်ရလားပေါ့။
မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း အမျိုးသားနဲ့ အတူနေတဲ့အခါ ဘာ့ကြောင့် သွေးဆင်းရတာလဲ ။ ။
မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်အချိန်အမျိုးသားနဲ့အတူပြန်နေသင့်တာလဲ ဆိုတာကို အရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်။ မီးဖွားပြီး ၄၅ ရက်နောက်ပိုင်းမှသာ အမျိုးသားနဲ့အတူပြန်နေသင့်ပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင် အတူပြန်နေတဲ့အခါ နောက်ကိုယ်ဝန် ထပ်ရသွားနိုင်သလို နုနယ်နေတဲ့ သားအိမ်အတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း အမျိုးသားနဲ့ အတူပြန်နေတဲ့ခါ သွေးဆင်းရတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ။ ။
( ၁ ) မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ပုံမှန်ဆင်းတဲ့သွေး မရပ်ခင် အတူနေမိတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ။
မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း သွေးဆင်းတတ်တာ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျပါ။ ကလေးမွေးထားတဲ့အရှိန်နဲ့ထိသွားတဲ့ သားအိမ်ကနေ ထွက်လာတဲ့ သွေးတွေ၊ အကျိအချွဲတွေနဲ့ တစ်ရှူးစတွေ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ဆင်းကိုဆင်းလာရပါတယ်။ ဒီလို သွေးဆင်းတာဟာ မီးဖွားပြီးပြီးချင်းရက်တွေမှာ များတတ်ပြီး နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတတ်ကာ အချိန်ကတော့ ၁လခွဲလောက်အထိ ကြာကြာ သွေးဆင်းတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်ဟာ အနာကျက်ဖို့ အားယူနေတဲ့ သားအိမ် အနူးညံဆုံးနဲ့ ပိုးဝင်ဖို့ အလွယ်ဆုံးအချိန် ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီအချိန်အတွင်း ( ၄၅ ရက် အတွင်း ) အတူတူမနေဖို့ တားမြစ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။u
( ၂ ) အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန် ဆက်ဆံမိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရိုးရိုးပဲ မွေးမွေး၊ ခွဲပဲ မွေးမွေး မီးဖွားပြီနောက်ပိုင်းကာလတွေဟာ မိန်းကလေးတွေ အတွက်တော့ တကယ်ကို အပြောင်းအလဲ မျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ပါ။ ခွဲထားတဲ့သူတွေက ချုပ်ရိုးနာနေတာတစ်မျိုး၊ ရိုးရိုးမွေးထားတဲ့သူတွေကလည်း ကလေးမွေးထားတဲ့အရှိန်ကြောင့် လိင်ကိစ္စ စိတ်မပါတာ၊ စိတ်အားငယ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အဝခံစားရမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် အတူနေပြီးနောက်ပိုင်း သွေးဆင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ကိုသေချာပြောပြပါ။
( ၃ ) မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့နေတာကလည်း အတူနေပြီးနောက်ပိုင်းသွေးဆင်းစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။. ။
ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း အတူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်မပါသေးတာ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေများနေတာ၊ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတို့ကြောင့် မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့တာ မျိုးတွေ ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီ အချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရင် အတူနေပြီးနောက်ပိုင်း သွေးဆင်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
( ၄ ) ချုပ်ရိုးမကျက်သေးတာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ။
မီးဖွားချိန် မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့လိုက်ရပြီး ပြန်ချုပ်ခဲ့ရတဲ့ အခါမျိုးမှာချုပ်ရိုး မကျက်သေးလို့ အတူနေပြီးနောက်ပိုင်း သွေးဆင်းတာဟာလည်း ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ဒီချုပ်ရိုးပျောက် ချုပ်ရိုးတွေဟာ ၁၀ ရက်နေ ၁၄ အတွင်း ပျော်သွားတယ်ဆိုပေမယ့် အနာကျက်ဖို့ကတော့ ၁ လလောက်ကောင်းကောင်းအချိန်ယူ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အနာမကျက် သေးတဲ့ အချိန်မှာ ဆက်ဆံခဲ့မိရင် သွေးဆင်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ မီးဖွားပြီး အတူပြန်နေတဲ့အခါ သွေးဆင်းရခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းအရင်း ၄ ခုပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆင်းတဲ့သွေးဟာ အနည်းငယ်ပဲ ဖြစ်သင့်ပြီး ခဏလေးပဲ ဆင်းရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သွေးဆင်းများတာမျိုး၊ အတူနေပြီး ဆင်းတဲ့ရက် ၁ ရက် ၂ ရက် ကြာတာတောင် မရပ်သေးတာမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ သွားတာကသာ အကောင်းဆုံးပါ ။ ။